7 ဥရောပတိုက်တွင်အကောင်းဆုံးခွေးလှေးစျေးကွက်များ | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား >7ဥရောပတိုက်တွင်အကောင်းဆုံးခွေးလှေးစျေးကွက်များ
ရထားကိုအဆင်ပြေဆုံးသွားမယ့်နေရာကိုသွားပါ မြို့ချိုး သို့မဟုတ်စျေးဝယ်, ဥရောပရှိအရှိဆုံးအံ့သြဖွယ်မြို့တော်ကအားလုံးကိုရှိသည်. ခွေးလှေးစျေးကွက်ရှိရာ retro နှင့်ခေတ်သစ်ဖြစ်ကြသည်, ပစ္စုပ္ပန်နှင့်သမိုင်း, အတူတူလာကြ, ကြီးစွာသောအရာတို့ကိုပေါ်ထွန်းဘယ်မှာ, နှင့်ငါတို့7ဥရောပရှိအကောင်းဆုံးခွေးလှေးစျေးကွက်များသည်ပြီးပြည့်စုံသောဥပမာဖြစ်သည်.
သင်စျေးဝယ်အကြောင်းကိုအသည်းအသန်လျှင်, နှင့်အထူးသဖြင့်စပျစ်သီးကိုစုဆောင်းမိဘို့, ထို့နောက်ဤ7ဥရောပရှိအကောင်းဆုံးခွေးလှေးစျေးကွက်များအမှန်တကယ်ဖြစ်လာသည်. ရိုးရှင်းစွာဥရောပလမ်းညွှန်၌ရှိသောကျွန်ုပ်တို့၏နောက်ဆုံးခွေးလှေးစျေးကွက်ကိုလိုက်လျှောက်ပါ, နှင့်တစ် ဦး ဖမ်းပြီး ခရီးဆောင်သေတ္တာကြီး!
အကယ်၍ သင်သည် Bavaria သို့သွားနေလျှင် နွေ ဦး ရာသီအတွက်ဥရောပအားလပ်ရက်, နှင့်အချို့သောလတ်ဆတ်သောစပျစ်သီးကိုဘဏ္treာကိုရှာဖွေ, ထို့နောက်သင်သည်မြူးနစ်၏fleရာမခွေးလှေးစျေးကိုချစ်လိမ့်မည်. ဤအံ့သြဖွယ်ခွေးလှေးစျေးသည်နွေ ဦး ရာသီပွဲတော်နှင့်တစ်နှစ်တစ်ကြိမ်ကျင်းပခြင်းဖြစ်သည်.
အဲဒီမှာကျော်လိမ့်မယ် 2000 ရောင်းသူ, အံ့သြဖွယ်စပျစ်သီးနှင့်အတူပါပဲ, ရယ်စရာစျေးနှုန်းများမှာ Louis Vuitton အိတ်လိုပဲ. ထိုကွောငျ့, သငျသညျဖြစ်ကောင်းမြူးနစ်အတွက် Riesen-Flohmarkt Theresienwiese ခွေးလှေးစျေးကွက်အတွက်စနေနေ့ကြောင်းရှင်းလင်းသင့်ပါတယ်. ဖြည့်စွက်ကာ, ရှင်းရှင်းလင်းလင်းစျေးဝယ်စာရင်းနှင့်အတူလာ, တတ်နိုင်သမျှစောစောရှိပါ. တံခါးဖွင့်သည်4နံနက်, သငျသညျတစ်ခုတည်းသောအစောပိုင်းငှက်ဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ!
အမှု၌သင်တို့ကိုမသိခဲ့ပါ, အမ်စတာဒမ်သည်ချမ်းသာသောကုန်သွယ်ရေးသမိုင်းရှိသည့်မြို့တစ်မြို့ဖြစ်သည်. ထိုကွောငျ့, ဒါဟာဥရောပအတွက်အကောင်းဆုံးခွေးလှေးစျေးကွက်များထဲမှအမ်စတာဒမ်၌တည်ရှိ၏အံ့သြစရာမရှိပါ. တစ်နှစ်တစ်ကြိမ်, အမ်စတာဒမ်အတွက်ပါလမ်းများ, တစ် ဦး ပွင့်လင်း - လေကြောင်းစျေးကွက်သို့လှည့်, တစ်ခုမှာအံ့သြစရာကောင်းတဲ့လေထုကို ၀ ယ်နိုင်၊ ဥရောပ၌အကြီးမြတ်ဆုံးမြို့ကြီးများ.
တစ်နှစ်တစ်ကြိမ်, ဘုရင့်နေ့အပေါ်တစ် ဦး အခမ်းအနားအဖြစ်, အမ်စတာဒမ်၏တူးမြောင်းများနှင့်လမ်းကြားများသည်ကြီးမားသောခွေးလှေးစျေးကွက်အဖြစ်သို့ပြောင်းလဲသွားသည်. စပျစ်သီးပြွတ်, အတတ်ပညာ, gadgets, နှင့်ဤတုန်လှုပ်နေသောခွေးလှေးဈေးကွက်တွင်အခြားတစ်ပတ်ရစ်ဘဏ္secondာများကိုသင်စောင့်နေလိမ့်မည်.
ဘယ်တော့လဲ?6နံနက်မှ 8 Aprilပြီလ 27 ရက်နေ့ညနေ.
ပြင်သစ်တွင်အကြီးဆုံးနှင့်အကျော်ကြားဆုံးခွေးလှေးစျေးကွက်, Grande Braderie de Lille ၏ခွေးလှေးစျေးကွက်ကိုလက်ခံလိမ့်မည် 10,000 ရောင်းသူ.
Lille ခွေးလှေးစျေးကွက်သည်ယခုနှစ်အကြီးမားဆုံးအဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပြီးစက်တင်ဘာပထမအပတ်တနင်္ဂနွေတွင်ဖြစ်သည်. သင်စပျစ်သီးသို့ရောက်နေတယ်ဆိုရင်, နှင့် retro ပစ္စည်းများ, ပြီးရင်စက်တင်ဘာလအတွက် Lille ကိုသွားဖို့လက်မှတ်ကိုမင်းပိုကောင်းလိမ့်မယ် 4ကြိမ်မြောက်– 5ကြိမ်မြောက်, တစ် ဦး စပျစ်သီးကို extravaganza သည်.
ဒါဟာဆိုပါတယ်, ဒါကြောင့်သင်ကအနီးကပ်သင်ယူပါလိမ့်မယ် 40 အားလုံးရပ်တည်ချက်မှတဆင့်လမ်းလျှောက်ဖို့နာရီ, နှင့်ရပ်တန့်ခြင်းနှင့်စျေးဝယ်ခြင်းမရှိဘဲပါပဲ.
စောင့်ရှောက်ရန်အနည်းငယ်အထောက်အကူပြုထားသောစာပိုဒ်တိုများ & သင်ယူပါ:
“ မင်းရဲ့အကောင်းဆုံးစျေးကဘာလဲ?” - မင်းရဲ့အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းကဘာလဲ?
"Coupons la poire en Deux" - အလယ်မှာတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်တွေ့ဆုံကြစို့
"ညှိနှိုင်း!” - အပေးအယူ!
အဲဒီမှာရရှိရန်မည်သို့? တစ်နာရီယူပါ TGV မှပဲရစ်မှရထား.
4. London ရှိ Portobello လမ်းစျေး
အင်္ဂလန်နိုင်ငံ၏အကောင်းဆုံးခွေးလှေးဈေးကွက်သည်လန်ဒန်ရှိ Portobello စျေးကွက်တွင်နေ့တိုင်းဖြစ်ပျက်နေသည်. ဖက်ရှင်, ရှေးဟောင်းပစ္စည်း, အစာ, နှင့်တစ်ပတ်ရစ်နေ့စဉ်ရတနာများသည်သင့်ကိုရက်သတ္တပတ်၏နေ့တိုင်းစောင့်နေလိမ့်မည်, ဒါပေမယ့်စနေနေ့မှာစွမ်းအင်နဲ့အရောင်တိုးစေဖို့ပြင်ဆင်ထားပါ.
ဒါကြောင့်, ရှေးဟောင်းစျေးဝယ်၏တစ်ရက်ပြီးနောက်, သငျသညျအရသာဟင်းသီးဟင်းရွက်ဖမ်းပြီးနိုင်ပါတယ်, ဒိန်ခဲ, နှင့် Westway ရှိဖက်ရှင်စျေးကွက်တွင်သင်၏စပျစ်သီးရှာပုံတော်အပေါ်ဆက်လက်မတိုင်မီအမြန်နေ့လယ်စာအဘို့နှင့်အခြားအားရစရာ. Portobello လမ်းဈေးသို့လာရောက်လည်ပတ်ခြင်းသည်လန်ဒန်တွင်ပြုလုပ်ရန်အကောင်းဆုံးအရာဖြစ်သည်, သင်တို့သည်ဤခွေးလှေးစျေးကွက်နှင့်လန်ဒန်အထင်ကရတစ်ရက်အပြည့်အဝသင့်ပါတယ်.
ကျနော်တို့ပဲရစ်စဉ်းစားတဲ့အခါ, ကျနော်တို့ချက်ချင်းလေထုပုံဖော်. အထူး, နကျနဲသိမျမှေ့သော, ရှေးဟောင်း, တော်ဝင်အားလုံး Paris နှင့်အတူစိတ်ထဲထံသို့လာကြ၏, နှင့်သူမ၏အံ့သြဖွယ်ခွေးလှေးစျေးကွက်ရန်.
ပဲရစ်ခွေးလှေးစျေးကွက်သည်ဖျောက်ထားသည့်ရှားပါးသောရတနာများကြောင့်ဥရောပရှိအကောင်းဆုံးခွေးလှေးစျေးကွက်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်. အာဖရိကအနုပညာ, စပျစ်သီးကိုအလှဆင်အပိုင်းပိုင်း, နှင့်အဝတ်အစားကိုသင်ဤကြီးမားသောခွေးလှေးစျေးကွက်မှာရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်အရာအနည်းငယ်သာဖြစ်ကြသည်.
သငျသညျပါရီသေးငယ်တဲ့အပိုင်းအစယူဆောင်လာရန်ဆန္ဒရှိလျှင်, ထို့နောက်ပဲရစ်ခွေးလှေးစျေးကွက်သည်စျေးဝယ်ရန်နေရာဖြစ်သည်. သင်စတင်ရှာဖွေသည် Rosiers လမ်း, အဓိကလမ်း, နှင့်သီးခြားစျေးကွက်သို့သွားနိုင်ရန်အတွက်ဆင်းလမ်းလျှောက်.
ဘယ်တော့လဲ? စနေနေ့ - တနင်္လာနေ့
အဲဒီမှာရရှိရန်မည်သို့? မက်ထရိုကိုစီးပါ, လိုင်းပေါ် Porte က de Clignancourt မှ ဦး 4, နှင့်ကွန်ကရစ်လမ်းဆုံဆီသို့ ဦး တည်လူအစုအဝေးလိုက်နာပါ.
ပွင့်လင်းသောတစ်ခုတည်းသောခွေးလှေးစျေးကွက် 365 တစ်နှစ်ရက်ပေါင်း, ဘရပ်ဆဲလ်ရှိ Ball ဂိမ်း, ဘယ်လ်ဂျီယံတွင်လည်းအကြီးဆုံးဖြစ်သည်.
အဆိုပါ Marolles ခရိုင်၏စိတ်နှလုံး၌တည်၏, သငျသညျစပျစ်သီးကိုမှတ်တမ်းများကိုရှာဖွေပါလိမ့်မယ်, နှင့်စောင်များပေါ်တွင်ထုတ်ရှားပါးစာအုပ်တွေ. အနီးအနားရှိလမ်းများပေါ်တွင်, သင်တစ်ပတ်ရစ်နှင့်ရှေးဟောင်းဆိုင်များရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်.
ဘယ်မှာလဲ? Place du Jeu de Balle ဘရပ်ဆဲလ်
မီလန်တွင်ခွေးလှေးစျေးကွက်အများအပြားရှိသည်, ဒါကြောင့်ကမ္ဘာ၏ဖက်ရှင်မြို့တော်ဖြစ်သကဲ့သို့အံ့သြစရာတော့မဟုတ်ပါဘူး. Mercatone dell'Antiquariato သည်မီလန်နိုင်ငံ၏အကြီးဆုံးခွေးလှေးစျေးကွက်ဖြစ်ပြီးလတိုင်း၏နောက်ဆုံးတနင်္ဂနွေနေ့တွင်ဖြစ်သည်။. ရှိပါလိမ့်မည် 380 ရှေးဟောင်းပရိဘောဂများ၊, သင့်ကိုစောင့်နေတယ်.
သို့သျောလညျး, မီလန်ရှိအပူဆုံးခွေးလှေးဈေးကွက်သည်အရှေ့ဈေးကွက်ဖြစ်သည်. သင်စုဆောင်းထားသောပစ္စည်းများသို့မဟုတ်ခေတ်သစ်အနုပညာလက်ရာများကိုသင်ရှာဖွေနေပါကအရှေ့ခွေးလှေးစျေးကွက်ကိုသင်ချစ်မြတ်နိုးလိမ့်မည်. အပြင်, နေ့လည်စာ (သို့) ဘီယာကို DJ set မှာယူနိုင်ပါတယ်, သငျသညျအေးမြစျေးကွက်ရပ်ကွက်တဝိုက်လှည့်လည်နေစဉ်. သင်ဝင်ပြီးတာနဲ့, သင်အစဉ်အဆက်ကဒီစွန့်ခွာချင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ retro & စပျစ်သီးပြွတ်ပါတီ.
ဘယ်မှာလဲ? Mecenate မှတစ်ဆင့်, 84
မီလန်ရှိ East Market ကိုဘယ်လိုသွားရမလဲ? M2 မက်ထရိုလိုင်းကိုသုံးပါ
ဥရောပသည်ခေတ်နှင့်လိုက်လျောညီထွေမှုရှိသောထူးခြားသောပေါင်းစပ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်, အံ့သြဖွယ်အကောင်းဆုံးခွေးလှေးစျေးကွက်များတွင်နေထိုင်ရန်လာကြ၏. ဥရောပသို့တစ်ခေါက်သွားခြင်းသည်အကောင်းဆုံးထဲမှတစ်ရက်ကိုမဖြည့်ဘဲပြည့်စုံလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ7ဥရောပတိုက်တွင်ခွေးလှေးစျေးကွက်. ထို့အပြင်, အနည်းဆုံးမရှိဘဲအိမ်ပြန် 1 သငျသညျမှာအားလုံးဥရောပသွားရောက်ခဲ့ပြီးဖူးပါဘူးနဲ့တူစပျစ်သီးကိုအပိုင်းအစဖြစ်ပါတယ်.
ဤတွင်မှာ တစ်ဦးကရထား Save, သင်၏ခရီးစဉ်ကိုစီစဉ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ကူညီပေးပါမည်7ဥရောပတိုက်တွင်အကောင်းဆုံးခွေးလှေးစျေးကွက်များ.
သင်၏ဘလော့ဂ်ကို“ ဥရောပရှိအကောင်းဆုံးခွေးလှေး (၇) ခု "ဘလော့ဂ်ကိုသင်၏ကွန်ရက်ပေါ်သို့တင်ချင်ပါသလား? သင်ဟာတစ်ခုခုကိုလုပ်နိုင်အယူကျွန်ုပ်တို့၏ဓါတ်ပုံများနှင့်စာပေးပြီးခရက်ဒစ်နှင့်အတူချိတ်ဆက်ဖို့ဒီဘလော့ပို့စ်. သို့မဟုတ်ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-flea-markets-europe%2F%3Flang%3Dmy - (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
အကောင်းဆုံး Biggestfleamarketeurope ဥရောပသမဂ္ဂ Europeshopping ကွမ်းခြံကုန်း စျေးဝယ် ရထားခရီးသွား